पढ्न नभ्याउँदा मन पोल्छ
२०७६ भदौ ७ शनिबार ०८:५१:००
बाल्यकालमा तपाईंको परिवारमा पठन–संस्कृति कस्तो थियो ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पाठ्यपुस्तक नै थियो । घरमा किताब धेरै हुन्थे । ती सबै किताब हामी आफूभन्दा ठूलाले नदेख्ने गरेर पढ्थ्यौँ । पढ्नु भनेकै पाठ्यक्रमको मात्रै किताब पढ्ने हो भनेर हामीलाई बुझाइएको थियो । तर, मेरी आमा असाध्यै राम्रो कथावाचक हुनुहुन्छ । उहाँले हामीलाई थुप्रै कथा सुनाउनुभएको छ । यसरी सुनाउनुभएको छ कि म अहिले पनि ती कथाका पात्रको सजीवता महसुस गर्न सक्छु ।
तपाईं बाल–साहित्य लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । तपाईंसँग बाल–साहित्यसम्बन्धी पुस्तक कति छन् ?
नेपाली प्रकाशकले छापेका साढे तीन सयभन्दा बढी बाल–साहित्यका किताब जम्मा गरेको छु । ती किताब पढ्न सुरु पनि गरिसकेँ ।
अरूको समीक्षा पढेर कुनै किताब पढ्नुभएको छ ?
त्यस्ता थुप्रै किताब छन् । संगीता खड्काको पुस्तक ‘युद्धका ती दिन’ पछि पढौँला पहिला बाल–साहित्य पढ्छु भन्ने योजना थियो । तर, पुस्तकबारे आएका समीक्षा पढेपछि ढिलो गर्न मन लागेन ।
एकदमै पढ्न मन लागेर महँगो किताब किनेर लगियो । तर, पढ्नै नपाई कसैले लगिदिएको अनुभव छ ?
पढ्न भनेर किनेको किताब पहिला आफैँ नपढी अरूलाई दिँदै दिन्नँ । तर, संग्रहका लागि भनेर किनेको ‘वार एन्ड पिस’ एउटी साथीले लगेकी अझै दिएकी छैन । मैले मागेको पनि छैन । हरायो भन्ली भनेर माग्न पनि सकेकी छैन ।
कुन उमेरदेखि पुस्तक पढ्ने बानी बस्यो ?
बीस वर्ष पुगेपछि नै पुस्तक पढ्ने बानी बस्यो । त्योभन्दा अगाडि पुस्तक पढ्ने कुरा त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिइनँ ।
तपाईले पढेका पुस्तकमध्ये बिर्सनै नसक्ने कुन पुस्तक हो ?
त्यस्ता पुस्तक धेरै छन् । कथाको कुनै एक पात्रमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र परिवेशबारे सोच्छु । पछिल्लोपटक म शिवानी सिंह थारूको ‘घुर्ना’का बारेमा सोच्छु । तर, ‘घुर्ना’ मात्र भन्दा पनि मलाई मधेसी दलितका विषयले घरिघरि ‘काठमाडौंमा एक दिन’को याद दिलाइराख्छ ।
तपाईंलाई कुनै आख्यानको बालपात्रले रुवाएको छ ?
‘तोत्तोचान’ पढेर म अहिले पनि रुन्छु ।
तपाईको घरको र्‍याकमा राखेको किताबमध्ये कुन किताबले ध्यान तान्छ ? त्यसो हुनुको कारण के हो ?
आजभोलि म आफ्नो याकतिर नहेर्नुपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छु । किताबको चाङ लागिसक्यो । पढ्न नभ्याएको कुराले मन पोल्छ । यो प्रश्नपछि मैले र्‍याकतिर सरर हेरेको खालिद हुसैनको ‘द काइट रनर’ आँखामा पर्‍यो । त्यो मैले कनिकनी पढेको पहिलो अंग्रेजी किताब हो । त्यसको कथावाचनले मलाई अरू थुप्रै किताब पढ्न प्रेरित गर्‍यो ।